Hubannoo dhaloonni har'aa injifannoo Adwaarratti qaban
Hubannoo dhaloonni har'aa injifannoo Adwaarratti qaban Featured
Ayyaanni Adwaa injifnnoo Itoophiyaan bara 1888 weerartoota Xaaliyaaniirratti gonfatte sababeeffachuun waggaa waggaan Guraandhala 23 kan kabajamu yoo ta’u, barana yeroo 122ffaaf guyyaa har'aa kabajama.
Ayyannichi bakka injifannoon itti galmaa'e naannawaa Tigraay Adwaattisni kabajama. Injifannoon galmaa'e kunis ol’aantummaa saba tokkoon galmaa'e osoo hintaane qindoominaafi walta’iinsa sabootaafi sablammoota Itoophiyaatiin gonfatame waan ta’eef bu’aa qabsoo sabootaafi sablammoota biyyattii hundaati.
Kuni ta’us hubannoo dhaloonni barateefi hinbaranne injifannoo kana irratti qaban kan nama kofalchiisuufi gaddisiisuudha. Kabaja guyyaa injifannoo kana ilaalchisuun gaaf deebii Gaazexaan Bariisaa jirattota magaalaa Finfinnee tokko tokko waliin taasise akka armaan gadiitti qindeessuun dhiyeesseera.
Durbee Muluu Barakat jiraattuu Magaalaa Finfinnee Kutaa Bulchiinsa Araadaatti hojii buna danfisuurratti bobbaatee kan jirtu yoo ta'u, kutaa 10fa xumurteetti. Guyyaa injifannoo Adwaa akka biyyaatti waggaa waggaan kabajamu ilaalchisuun hubannoo qabdu akka nuuf qoodduuf gaaffii isheef dhiyeessineef deebii kenniteen akka jettetti, ayyaanni Adwaa kufaatii Dargii sababa godhachuun kan kabajamu ta'uu dubbatti.
Ayyaanni Adwaa guyyaa sirni abbaa irree Dargii itti kufeefi injifannoon itti galmaa'eedha kan jettu Dubaree Muluun, waa'ee injifannoo Adwaa kana caalaa waanan beeku hinqabu. Seenaa ofii sirriitti beekuu dhabuun sirrii akka hintaanes eerteetti.
Dargaggoo Isaayyaas Caalleemoo kutaa magaala Araadaatti hojii kophee qulqulleessuurratti bobba'ee kan jiru yoo ta'u, ayyaanni Adwaa maaf akka kabajamu wayita isa gaafannetti, Xaaliyaaniifi Itoophiyaan wal lolanii turan jedhama. Hubannoo ani dhimma kana irratti qabu baay'ee xiqqoodha. Waa’ee ayyaana Aduwaa gaafatamuurra waa’ee kubbaa miilaa Maanchisteriifi Arsenaal osoo nagaafattanii deebii quubsaa isiniif kennuun danda'a jedha.
Waa’ee Itoophiyaa beekuumoo waa’ee biyyoota Awrooppaa beekuutu sifayyada gaaffii jedhuuf lamaanuu faaydaa qaba ta’us haala yeroo wajjiin walbira qabamee wayita ilaallu, dhaloonni haaraan seenaa ofii beekurra waa’ee liigii kubbaa miilaa Awrooppaa odeessuutu salphataaf. Dhaloonni har'aa kun seenaa biyya isaanii akka barataniif hojiin hubannoo gabbisuu kallattii garagaraan kennamuu akka qabu dubbata Dargaggoo Isaayyaas.
Babal’achuu teeknooloojii wajjin walqabatee miirri aadaa ofii hordofuufi beekuu liqimfamaa kan jiru yoo ta’u, irratti hojjetamuu baannaan yaaddoo egeree biyyittiiti. Itoophiyaan akka Afrikaatti biyya seena qabeettii taatus dhaloonni yeroo ammaa kunuunsa barbaachisaa aadaaf seenaasaaf taasisaa akka hinjirre yaadota dargaggoota tokko tokko keessaa maddanirraa hubachuun danda'ameera.
Haata’uutii miira sabboonummaafi ofitti amanamummaa horachuu keessatti eenyummaa seenaa ofii beekuun murteessaadha. Aadaafi seenaa biyyoota biroo leellisuufi kan ofii wallaaluun qaanii waan ta’eef itti yaaduun barbaachisaadha.
Ayyanuma Adwaa kana ilaalchisuun dargaggoo naannawaa Tigraayirraa dhufuun magaalaa Finfinnee keessa daandiirra deemee fooxaa gurguru tokko waliin gaaffiifi deebii taasisneen deebiin kenname ammas kan nama ajaa'ibuudha.
Dargaggoo Tsaggaayee Walda Sillaasee barnoota 'Qeesii Askuwaalaa' jedhamu akka barateefi yeroo ammaa daandii magaalaa Finfinneerra olii gadi deemuun fooxaa gurguree jiraata. Ayyaanni Adwaa maaf akka kabajamu gaaffii jedhuuf injifannoo mootiin Aluulaa Abbaa Naggaa galmeessise sababeeffachuun kabajama jechuun deebisa.
Injifannoo Aluulaa Abbaa Naggaa sababa godhachuudhaan guyyaan kun waggaa waggaan Adwaatti kabajamaa jiraachuu kan himu dargaggoon kun, odeeffannoo gama kanaan qabus abbootiirraa kan argate ta'uu duabbata.
Barattuu Tsiyoon Musee mana barumsaa Minilik sadarkaa 2ffaatti kutaa 10ffaa kan barattu yoo ta'u, ayyaanni Adwaa injifnnoo Itoophiyaan weerartoota Xaaliyaaniirrattigonfatte sababeeffachuun waggaa waggaan kabajama. Injifannoon kun qabsoo sabootniifi sabalammootni biyyattii taasisaniin kan galmaa'e ta’uu dubbatti.
Hubannoo dhaloonni haaraan gama kanaan qaban laafaa ta'uu kan himtu barattuun kun, seenaa ofii beekuun olitti teeknooloojii ammayyaaf bakka kennuun babal’achaa jira. Waa’ee seenaa Adwaa osoo gaafatamne barataan bal'inaan ibsuu danda'u muraasa. Barattoonni hedduun fiilmii Qaanaafi tapha kubbaa miilaa Awrooppaafi araada garagaraan liqimfamuun eenyummaasaa dagatee waan jiruuf hanqina hubannoo gama kanaan mul'atu furuun dhimma xiyyeeffannaa barbaadu ta'uu eerti.
Walumaagalatti, dhalootni barates ta'e hinbaranne eenyummaafi seenaa biyyasaa sirriitti beekuun barbaachisaadha. Dhaloonni eenyummaasaa hinbeekne of ibsuus ta'e seenaa biyyasaa waan hinbeekneef dhaloonni haaraan waa’ee seenaa biyyasaaniirratti hubannoo gahaa akka qabaatan taasisuuf mootummaafi maatiin gahee isaanirraa eegamu bahachuu qabu.
Torban kana/This_Week 10592
Torban darbe/This_Month 96949
Guyyaa mara/All_Days 1435372